အသေးအဖွဲ 360 Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အသေးအဖွဲ 360
အသေးအဖွဲ 360 APK ကို
အသေးအဖွဲ 360 သင်သည်သင်၏ android ပေါ်မှာကစားနိုင်တဲ့အခမဲ့ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသေးအဖွဲ app ကိုကစားရန်လွယ်ကူသည်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဦးနှောက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကြိုးစားပါနှင့်သင်စွဲလမ်းတှေးအချေါနှငျ့အိုင်ကျူစိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်သင့်ဦးနှောက်တစ်ခုစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောတိုးတက်မှုပေးနိုင်လိမ့်မည်!
အဆိုပါ trivia ဂိမ်းကစားရန်မည်သို့
Post ကိုသငျသညျအသေးအဖွဲပဟေဠိအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဦးနှောက်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ် download လုပ်ပါ။ အဆိုပါဉာဏ်စမ်းပဟေဠိထိုကဲ့သို့သောဂန္ထဝင် 4-အဖြေတွေကိုမေးခွန်းများကို, စစ်မှန်တဲ့ / မှားယွင်းသောမေးခွန်းများကို, အလံပဟေဠိ, မြေမှတ်တိုင်နက်နဲသောနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသတ်မှတ်နေကြသည်။
ရိုးရှင်းစွာအသင်ရွေးချယ်ထားသော mode ကိုထံမှမေးခွန်းများကိုကြိုးစားကြနှင့်သင်ထိမှန်နိုင်ပါတယ်မည်မျှညာဘက်အဖြေကိုစစ်ဆေး!
App ကိုဖွင့် Feature ကို:
•အသုံးပြုသူဖော်ရွေ interface ကို,
•ယင်းဉာဏ်စမ်းပဟေဠိထိုကဲ့သို့သောဂန္ထဝင် 4-အဖြေတွေကိုမေးခွန်းများကို, စစ်မှန်တဲ့ / မှားယွင်းသောမေးခွန်းများကို, အလံပဟေဠိ, မြေမှတ်တိုင်နက်နဲသောနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသတ်မှတ်နေကြသည်။
app ကိုအသေးအဖွဲ 360 Download များနှင့်ကျပန်းမှာညဏ် session ကိုခံစားစတင်ပါ။ သငျသညျသေချာဘို့သင့်ဟာ android အပေါ်အရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းရပါလိမ့်မယ်။
1 ။ အပတ်စဉ်ဦးဆောင်သူ - တစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမား!
2 ။ သင့်ရဲ့ဧည့် account ကိုသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်ပါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
19.93 ကို MB
1,000,000 + downloads,
စမတ်ဇီးကွက် Apps ကပ
အသေးအဖွဲ Crack 2
အကောင်းဆုံးပဟေဠိ Apps ကပ ...
Quizoid 2019 ...
Voice GPS Driving Directions –Lite၊ GPS Navigation
ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား, Flyer ဒီဇိုင်နာ, ကြော်ငြာစာမျက်နှာဒီဇိုင်နာ